‘हामी तिम्रो व्यवस्थालाई मान्दैनौँ’
आज यहाँ हामी तिम्रो व्यवस्थालाई मान्दैनौँ, तिम्रो व्यवस्थासँग प्रतिरोध गर्नेवाला छौँ, तिम्रो व्यवस्थाको बाटो छेक्नेवाला छौँ भनेर भन्न उभिएका हौँ। हामीले यो व्यवस्थाभित्र सुधार खोजिरहेका छैनौँ, हामी यो व्यवस्थाकै विकल्पमा बहस सुरु गर्न खोजिरहेका छौँ।
यो व्यवस्थाविरुद्धकै विकल्पको बहस भनेको के हो? यो व्यवस्था नै भनेको के हो? यो व्यवस्था भनेको पितृसत्ता हो, जसले आज महिलाहरुलाई दिनदहाडै बलात्कार गरिरहेको छ। महिलाहरुलाई हिंसा गरिरहेको छ। पीडक र हिंसकहरु खुलेआम हिँडिरहेका छन्। यो व्यवस्था भनेको दलितविरुद्धको व्यवस्था हो, जसले भेरीमा दलितका लासहरुलाई बगाइरहेको छ। र, यसले उन्मुक्त हाँसो हाँसेर हिँडिरहेको छ। यो व्यवस्था भनेको पुँजीवादी व्यवस्था हो, जसले आज आदिवासीहरुका चिहान चौतारीहरु खोतलिरहेको छ, खुवालुङहरु फुटाइरहेको छ र तिनलाई बाँच्न पाउने अधिकारहरुबाट वञ्चित गरिरहेको छ। तिनका भाषाहरुबाट वञ्चित गरिरहेको छ, तिनका सौन्दर्यशास्त्रहरुबाट वञ्चित गरिरहेको छ। र, त्यसले एकल जातीयताको पाठ मात्र पढाइरहेको छ। त्यसैले, आज यहाँ हामी इतिहासको मुलबाटोमा उभिएर तिम्रो इतिहासलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ भन्न उभिएका छौँ।
हामी यो कुरा तपाईंहरुलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ। यो श्रमिकहरुको व्यवस्था होइन, यो मजदुरहरुको व्यवस्था होइन। यो विद्यार्थीहरुको व्यवस्था होइन। आज स्वास्थ्यमा लुट कसले मच्चाइरहेको छ? सीमित मुठ्ठीभरका लुटखोरहरुले। एउटा जातीका मान्छेहरुले। एउटा क्षेत्रका मान्छेहरुले सयौँ वर्षदेखि यो देशमा दलन, अत्याचार गरिरहेका छन्, अब हामी यो अन्यायको बाटो छेक्न चाहन्छौँ। हामी प्रतिरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी प्रतिकार गर्न चाहन्छौँ। आज हामीले यहाँबाट यही जबाफ दिन खोजिरहेका छौँ। आज हामी इतिहासको यो विन्दुमा भन्न चाहन्छौँ कि, हामी तिमीलाई अस्वीकार गर्छौँ। अस्वीकार गर्नेहरुलाई तिमीले हेर्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ।
इतिहासमा एकदुई जना मान्छेको पनि फरक मतको अर्थ हुनुपर्छ। त्यसैले आज हामी यो व्यवस्था, पितृसत्ता, जातीवाद, ब्राह्मणवादको विरुद्धमा उभिएका मान्छेहरु हौँ। अब हामी किसानहरुका खेतमा गएर, दलितहरुका बस्तीमा गएर, विद्यार्थीहरुका क्याम्पसमा गएर अभियानहरु सञ्चालन गर्नेछौँ।
आजको यो कार्यक्रम हाम्रो पहिलो कार्यक्रम हो। अब आगामी हामीहरु यस्ता कार्यक्रमहरु सडकमा गरिरहनेछौँ। जुनदिनसम्म यो व्यवस्था बदलिने छैन, यो व्यवस्थाले आफूलाई बदल्न स्वीकार गर्नेछैन, यो व्यवस्थालाई हामी चुनौती पेश गर्न चाहन्छौँ। र, त्यो चुनौतिको उद्घोष आजको कार्यक्रम हो भन्ने जानकारी दिँदै म तपाईंहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद !
(बिहीबार व्यवस्था परिवर्तनका लागि प्रतिरोध समूहले गरेको बानेश्वर मार्चमा मनोज खतिवडाले दिएको मन्तव्य)
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १०, २०७८ १२:४६